Ikhambi eliphumelelayo lomuntu wezimpethu zezingane: izici zesicelo nezincomo
Ezempilo, Alternative Medicine
Abaningi babhekana neqiniso lokuthi izibungu zivela emntwaneni. Izimpawu (izixazululo zabantu, ngendlela, ukubhekana nazo ngokuphumelelayo), njenge-itch in the anus, ushintsho ngokungazelelwe kwesisindo nokunye. Kufanele ngokushesha uqaphele. Thatha ingane kudokotela. Uma kuqinisekiswa ukuthi usulelekile ngezibungu, ungasebenzisa izixazululo zabantu ukuze uziqede, okumangalisa ngokuhluka kwazo. Kudingeka ukwazi ukuthi odokotela abangekho obhekene nemiphumela yokwelashwa ngokusho kokupheka kwemithi yendabuko. Abanaso iziqinisekiso, izitifiketi, izibikezelo. Ngakho-ke, abazali kudingeka baqinisekise kabusha ngolwazi oluthinta impilo yezingane zabo yonke imithwalo yemfanelo.
Ngakho-ke, uthola ukuthi izibungu ziye zavela emntwaneni. Indlela yokuphatha lesi sifo ngamakhambi abantu? Izindlela zithathwa ngomlomo ngesimo se-herbal decoctions, i-infusions, izithelo ezintsha, imifino, amaji, amafutha, imbewu. Ngaphezu kwalokho, i-enemas isetshenziselwa ukuxosha ama-parasites. Ngokuvamile, lezi zenzo zenziwa ngendlela eyinkimbinkimbi. Ngesikhathi kuhlanzwa izibungu, ukudla okumihlaza kufanele kugcinwe ukuze kunciphise umthwalo ohlelweni lokugaya ukudla. Kuyinto efiselekayo ukudla ukudla okunomphumela we-laxative.
Kodwa ayikho ikhambi lomuntu yezimpethu zezingane ngeke liphumelele, uma yonke imindeni ingatholi ukwelashwa, akukho ukungafihlisi endlini, ukuhlanzeka akubonwa. Kulokhu, amathuba okutheleleka kabusha aphezulu kakhulu.
Izinambuzane yiziphazamisi. Uma zitholakala, kusho ukuthi kufanele zilahlwe. Ngokuvamile, lesi sifo senziwa ngendlela evulekile (evulekile). Ukuthungatha, ukukhipha isilwane, imibuthano ngaphansi kwamehlo, ukuphazamiseka kokugaya ukudla, ukungabi nesifiso sokudla yisisusa sokubonisana nodokotela. Ukwelashwa kuthathwa ngumchwepheshe we-parasitologist. Ngezinhlobo ezingavamile, izinhlobo ezimbi zokuhlasela, izinhlobo zokupheka ziyisixhobo esisizayo.
Imithi yabantu abaningi ayinabungozi ngokwanele, kodwa kunoma yikuphi, ngaphambi kokuyisebenzisa, usadinga ukuya kudokotela ukuze uthole ukubonisana. Kuphela ngale ndlela ungaqiniseka ngokuthi ubuchopho bulungile futhi uqiniseke ngokuphelele ukuthi ukuwabulala ekhaya kuzohamba kahle. Kodwa ukuvinjelwa kwezibungu ezinganeni ngamakhambi abantu kungenziwa ngaphandle kokuvakashelwa okungeziwe kumchwepheshe.
Kuze kube manje, izindlela eziningi zendabuko zezinambuzane zivame kakhulu. Isici sabo esiyinhloko ukuthi zonke izindlela zokupheka zisisiza ukuqeda u-1-2 kuphela wohlobo lwabo. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba uqale ukwelashwa, usadinga ukuya emtholampilo uphinde udlulise ukuhlaziywa ukuze unqume uhlobo lwezibungu.
Ukuvimbela inkinga: Izibungu ezinganeni
Izimpawu (ukwelashwa kwamakhambi omuntu kwenziwa uma kwenzeka ukubonakala) kwezidumbu esichazwe ngenhla. Kumele kuqashelwe ukuthi izikhambi zokwelapha nezomuntu zisiza ukubhekana nezimpethu, kanye nezibungu zazo. Kodwa ngeke banikeze isiqinisekiso sokuthi esikhathini esifushane ama-parasites ngeke abuyele emuva. Kungenxa yalokhu ukuthi kubalulekile ukuqala ukulandela imithetho eyisisekelo yokuvimbela, ngaphezu kwalokho, ukujwayele ingane yakho.
Ukugeza izithelo, imifino kanye namajikijolo. Ikakhulukazi, libhekisela ezitshalweni eziphakanyiswe emhlabathini noma ezikhula kakhulu (itrobheli njll).
Ukugeza izandla. Lokhu kufanele kwenziwe ngemuva kokuvakashela indlu yangasese, uhamba emgwaqweni, ngaphambi kokudla.
Ukuhlanza njalo. Lapho ingane ihlala khona, kuyadingeka ukuthi ugeze njalo phansi. Ngaphezu kwalokho, kuyoba kuhle ukugeza ngezikhathi nge seseti kanye namathoyizi akhe.
Ukuphuza. Kunconywa kakhulu ukuthi ungasebenzisi amanzi kusuka emfuleni noma empompini. Kumele kubiliswe noma kuhlungwe.
Ukuxhumana nezilwane ezifuywayo. Izingane nezilwane zingenwa igciwane, njengokuvela kwamakati emgwaqweni nezinja, nasekhaya. Ngesikhathi esifanayo emandleni abazali ukukhawulela ngokuphelele ukukhulumisana kwengane neyokuqala nokuqhuba prophylaxis evamile ngeyesibili.
Lawula ukuhamba. Kumele kuqashelwe ukuthi abazali kudingeka baqaphele umntwana kokubili nasemgwaqweni. Ama-parasites angenwe igciwane ngokumane ephonsa ithoyizi phansi, bese efaka emlonyeni wakho. Ngakho-ke, kungcono ukuchazela lo mfana kusukela emncane, ukuthi akufanelekile ukuzama noma yini, futhi ungamniki ukudla emgwaqweni.
Njengoba sekushiwo ngenhla, ungakwazi ukuqeda ngokuphelele izibungu ekhaya kuphela uma wazi kahle uhlobo lwezilwane. Indlela yokususa izibungu zezingane ngama-folk amakhambi, uma kwenzeka ukuthi izimpingane zizinzile emzimbeni wengane? Lokhu uzothola ngezansi.
Umhluzi womhlonyane obabayo
Ukwelashwa kwezibungu ezinganeni zokwelashwa zabantu kungase kuqale nge-decoction yomhlonyane. Ukwenza lokhu, uthele amathisipuni amabili amanzi ithisipuni lesotshani. Umhluzi kufanele ushiywe ukupholisa ngaphambi kokukhipha. Udinga ukunikeza ingane isipuni ngaphambi kokudla ngalunye. Ungangezela uju ukuze uthuthukise ukunambitheka.
Ukwelashwa kwezibungu ezinganeni ngamakhambi abantu akukwazi ukwenza ngaphandle kwegalikhi. Isetshenziselwa ukwakha isixazululo se-enema. Ukuze wenze lokhu, ikhanda elilodwa le-garlic kumele liphekwe esimweni esithambile esibukweni sobisi. Ingxube esilungele ukucindezeleka, epholile futhi yenza ubusuku bobusuku. Ukwelapha ingane kuyokwanela ½ indebe, kanti inqubo kumele iphindwe nsuku zonke ngesonto.
Leli yindlela ephumelelayo kakhulu yomuthi wezimpethu zezingane. Ukuze ukulungiswa kwalesi ukumnika kudingekile ukuthululela isishukela semifino ngamanzi abilayo bese ususa ukunika amahora angu-6. Uketshezi oluqediwe lusetshenziselwa ukuhlaziywa. Izingane ziyanele iziglasi ½ kuphela ngokwenza inqubo. Ukwelashwa kuthatha izinsuku ezingu-4-6.
Sifunde ukukhipha izimpethu emntwaneni ngamakhambi omuntu. Kodwa lokhu kuphezu kwazo zonke izindlela zokupheka. Ungaziqeda futhi ngosizo lomnsalo ovamile. Isetshenziselwa ukumnika. Ukuze ugodle izibungu ezinganeni, udinga ukuthatha i-bulb yesayizi evamile, usike, bese uthela ingilazi yamanzi abilayo uphinde ususe amahora angu-12. Uthole ukuxilongwa kwe-infusion futhi uphuze izinsuku ezingu-3-4 ngokulandelana ½ indebe ngosuku. Iresiphi yale ndlela yabantu ingasetshenziswa futhi phambi kwama-ascarid emzimbeni.
Lolu hlobo lubandakanya ukuphrinta, ukufiphaza kanye nebhebheni ebanzi. Izakhamuzi eziphakathi kwazo kukhona izinhlanzi ezithile (i-perch, i-burbot ne-pike), ingulube nezinkomo. Ukutheleleka ngaloluhlobo lwezilwane ezingasetshenziswa izingane, ukudla ukudla okuchazwe ngenhla, akukwenziwanga ngokwanele, kuphuthumisiwe kabi. Kodwa lapha futhi futhi ikhambi lomuntu izimpethu zezingane lizosisiza. Ngezansi kukhona izindlela zokupheka.
Le ndlela izosiza esikhathini esifushane ukuhoxisa izimpethu. Ingane kufanele idle i-herring kusihlwa ngemali engakwazi ukunqoba. Ekuseni udinga ukupheka amagremu angama-100 we-porridge ezivela imbewu ye-ithanga ne-jerberry juice. Ngemuva kokulala, kudingeka usebenzise isigamu sale nhlanganisela, futhi emva kwehora eli-1 - ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho kuyadingeka ukugcina ukuphumula kombhede amahora amabili. Ekupheleni kwalesi sikhathi, umntwana udinga ukunikeza isipuni samafutha we-castor, ngaphezu kwalokho, umcele ukuba afane. Ngokuyinhloko, lesi sidakamizwa senza ngokushesha.
Leli yindlela ephumelelayo kakhulu yomuthi wezimpethu zezingane. Kudingeka udle ngesisu esingenalutho esingu-100 g yalo mkhiqizo. Ngemva kwehora, uphuze ingilazi yobisi olufudumele, lapho ikhanda likagalikhi laliphekwe ngaphambilini. Ngemuva kwemizuzu engu-30 udinga ukuphuza i-laxative futhi emva kokunye amahora amabili ukwenza i-enema. Kufanele kulungiswe emanzini afudumele lapho igalikhi iphekwe khona ngaphambili.
Kumele kuqashelwe ngokushesha ukuthi izinqubo zendabuko zezimbungu zalezi zinhlobo zisetshenziswa kakhulu:
Imbewu yeCztvarnoe. Kudingeka ukuxuba ithisipuni lomkhiqizo uju, bese unikeza ukudla isidumbu esiswini esingenalutho. Ngemuva kwamahora amabili, phinda isenzo. Ngalesi sikhathi, ingane kufanele ilambile. Okulandelayo, udinga i-laxative. Ukwelashwa okunjalo ekhaya kusiza ngokushesha futhi kuhle ukuqeda ama-parasites.
I-mistletoe imhlophe. Izindlela zendabuko zokwelapha zihlanganisa ukusetshenziswa kwe-powder wamaqabunga nezithelo zaleso sitshalo. Kumele zixutshwe nezimpande ezichotshoziwe ze-valerian yokwelapha (0.5: 0.5: 1). Isidakamizwa kufanele sithathwe kanye kuphela ngosuku izinsuku ezintathu.
Kwenzeka ukuthi abazali abazi kahle uhlobo lwezibungu. Isibonelo, akakwazi noma ngenxa yezizathu ezithile, ukuhlaziywa kwe-stool, futhi ukutholakala kwama-parasites kusobala.
Kulesi simo, ukwelashwa kwezibungu ngezindlela zendabuko kusatholakala. Kunezindlela zokupheka eziningana ongabhekana nazo ne-helminths ezinhlobonhlobo ezahlukene.
Abantu baseWalde abamthandi kakhulu. Ngakho-ke, uma kukhona ukusola ukuthi izingane ziye zathonywa nazo, udinga ukufaka emenyu yabo ngaphezulu isanqante puree kanye ijusi. Ngaphezu kwalokho, kunesimiso sokwelashwa esenziwe ngomumo. Kuthatha izinsuku ezimbili zokuqala zenkambo ukunikeza ingane izaqathe ezingaphezulu. Bese kuzodingeka ukuba aphuze ezinye izinsuku ezimbalwa ngesikhathi sokudla kwasekuseni 250 g wejusi kusuka kulezimpande. Ngenxa yalokho, imbungu ikhubazeka, emva kwalokho iyokhipha ngaphandle kwezinkinga.
Ngesisekelo sabo, i-enema ingasusa ama-parasites ngokushesha kakhulu. Esigodini samanzi, engeza 100 g wegalikhi ehlanjulisiwe, kanye nezipuni ezimbili ze-flaxseed. Ingxube ekulungele kufanele ibiliswe, vumela ukupholisa, ukucindezeleka, bese ufaka i-anus yengane nge-enema. Inqubo kufanele iphindwe izinsuku ezintathu.
I-Peony tincture: ingozi nokuzuza, izindawo, ukubuyekezwa. Ukusetshenziswa kwe-pion tincture ebuchotsheni
I-Alum. Ukusetshenziswa kwamaminerali
I-Zinegolovnik flat-leaf: impahla yokwelapha kanye nokuphikisana. Ukupheka kwemithi yendabuko
Anyanisi ubisi kusuka ukhwehlela: umuthi. Ukupheka kwabantu ngenxa yokukhwehlela
Ubisi nge-soda ekukhwehleleni: ukubuyekezwa. Ubisi olunoshukela ne-soda ekukhwehleleni
Ihhotela "Armenia", Kazan: ukubuyekeza nempendulo
Kuvele biography ezithakazelisayo Dmitry Vasilevsky - elidumile umculi, umculi, umqambi
Izidakamizwa "Diprosalik". Yokusetshenziswa kanye nencazelo
Wakhafulela izinwele ubude naphakathi: ongakhetha eziningana
Orient Amahhotela Palace Umkhaya 5 * - one of the best umndeni amahhotela e Alanya
I kwabantu ngokhonkolo
Izibhebhe cystitis kwabesifazane. Top 10 emithi yokwelapha cystitis
Indlela yokwenza umamukeli ngokuba compressor ngezandla
Ubhake inyama yenkonyana kuhhavini: emaresiphi lamabili eyodla
Isobho ecebile porcini amakhowe (fresh): okokuqala isidlo iresiphi
Mass Atomic: amaphetheni kwendle